LG G8 ThinQ: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမှု | Androidsis
MWC 2019 ၏ပထမနေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတင်းများစွာထွက်စေသည်။ LG ရဲ့အလှည့်ပါ ဒီရက်သတ္တပတ်တွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကောလဟလတွေများလာတယ် ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ပွဲတော်မှာတင်ဆက်သွားခဲ့သည်. ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှထွက်ခွာခဲ့သည့်ပထမဆုံးမော်ဒယ်မှာ LG G8 ThinQ ဖြစ်သည်သင့်ရဲ့အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်းအသစ် နောက်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များတွင်အတုဥာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသည်။
LG G8 ThinQ တွင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့နားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားမှုကိုသေချာစေရန်သေချာသည့်အသွင်အပြင်တစ်ခု။ ကိုရီးယားကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အမှတ်အသားအသစ်မှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာမျှော်လင့်နိုင်သနည်း။
ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်သည်ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း ဆက်၍ လောင်းနေသည်အစားရေတစ်စက်၏ပုံစံအတွက်ထစ်၏။ ဒီကိရိယာ၏နောက်ဖက်တွင်ကင်မရာသုံးချောင်းကိုတွေ့ရသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Android ဈေးကွက်တွင်စွမ်းအားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာနှင့်ပါရှိသည်။ ဒါကြောင့် LG Device မှာစွမ်းအားကြီးမားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် LG G8 ThinQ
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် LG G8 ThinQ
ကိုရီးယားကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူသည်ဖုန်းတွင်ရှိသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစပီကာကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်။ အဲဒီအစား, LG G8 ThinQ တွင်ဖုန်း၏ DAC ဖြစ်သည်32-bit Quad DAC သည်ဖန်ခွက်ကိုတုန်ခါစေရန်ဖန်ထဲသို့တုန်ခါမှုကိုပို့ပေးရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ဒါဟာအမှတ်တံဆိပ်၏ဤမော်ဒယ်အတွက်အများဆုံးမှတ်ချက်ပေးအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်သုံးစွဲသူများမည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားကိရိယာ၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်။
နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ LG G8 ThinQ
ပုံစံ G8 THINQ
ဖန်သားပြင် ၆.၁ လက်မအရွယ် OLED QHD + resolution နှင့်အတူ 6.1 x 3120 pixels နှင့် 1440: 19.5 အချိုးအစားရှိသည်
ရှေ့ကင်မရာf/ 8 နှင့်အတူ 1.7 အမတ်
ဆက်သွယ်မှု Bluetooth 5.0 GPS FM ရေဒီယို USB-C 4G WiFi 802.11a/ c
ဘက်ထရီ အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနှင့်အတူ 3500 mAh
ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်သည်စျေးကွက်တွင်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သော OLED မျက်နှာပြင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းပါ ၆.၁ လက်မ panel အရွယ်အစား, 19,5:9မျက်နှာပြင်အချိုးအစားနှင့် QHD + resolution ကိုအတူ။ LG G8 ThinQ တွင် Snapdragon 855 ပရိုဆက်ဆာကိုရရှိပြီးစျေးကွက်တွင်အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ဤကိရိယာတွင် RAM နှင့်သိုလှောင်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာတွေ့ရသည်။ WiFi5ကိုအသုံးပြုသည်။ မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအတွက် NFC လည်းရှိတယ် ဖုန်းပေါ်တွင် Bluetooth ပေါင်း ၅.၀ ။ FM ရေဒီယိုလည်းဒီအမှတ်တံဆိပ်၏မော်ဒယ်များစွာတွင်မြင်နေရဆဲဖြစ်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကိရိယာ၏လူကြိုက်အများဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာ Hand ID ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ကိုမှတ်သားခြင်းဖြင့်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ LG G8 ThinQ သည်အသုံးပြုသူလက်၏ပုံသဏ္,ာန်၊ အထူနှင့်အခြားသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် device ကိုအချိန်တိုင်းသော့ဖွင့်ရန်အခြားနည်းလမ်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဘက်ထရီအဘို့ ၃၅၀၀ mAh ရှိတယ်, အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းရှိပါတယ်။ ကင်မရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်သည် 16 + 12 + 12 MP သုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားကောင်းမွန်သောဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်နှင့်တယ်လီဖုန်းဓာတ်ပုံကဲ့သို့သောအာရုံခံကိရိယာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Optical zoom နှင့်ကျယ်ပြန့်သောထောင့်မှကြည့်လျှင်အလင်းမှုန်ဝါးခြင်းနှင့်အတုဥာဏ်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ဖုန်းများနှင့်သာပုံမှန်ဓာတ်ပုံများကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဖုန်းတွင်ဓာတ်ပုံအပိုဆောင်းထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤစက်တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောနောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ အဲဒါကို Air Motion လို့ခေါ်တယ်ဖုန်း၏ရှေ့ကင်မရာရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဝေဟင်အမူအယာများဖြစ်သည်။ ဤအမူအယာများကြောင့်ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်နိုင်သည်။ ဖန်သားပြင်များကိုလည်းယူပါ၊ ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကားမောင်းခြင်းကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၎င်းသည်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ကြည့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ပေမယ့်။
LG G8 ThinQ ကိုယခု MWC 2019. တွင်တရားဝင်ပြသထားပြီးဖြစ်သည် အဘယ်အရာကိုမျှပစ်လွှတ်အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့တယ် ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်၏ high-end ကနေ။ ယခုအချိန်တွင်စတိုးဆိုင်များသို့ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မည်သည့်နေ့ရက်မျှမရှိပါ။ ဒီတော့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဒီအကြောင်းကိုထပ်ပြောဖို့ငါတို့စောင့်နေရတယ်။
ဒီဖုန်းမှာရှိမဲ့စျေးနှုန်းအကြောင်း စတိုးဆိုင်များသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့မှာသတင်းအချက်အလက်လည်းမရှိပါဘူး။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ထုတ်ကုန်များကိုသိရှိခြင်းသည်၎င်းသည်စျေးကြီးမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်အထိဘာမျှဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့တာပေမယ့်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဤကိရိယာမှကြားရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
LG G8 ThinQ နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG G8 ThinQ - ကိုရီးယားတံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်
Xiaomi Mi9၏စျေးနှုန်းမှာအရှုပ်တော်ပုံဖြစ်သည်
TCL သည် MWC 2019 တွင် DragonHinge နှင့်ကင်မရာအမျိုးမျိုးပါသောခေါက်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းများကိုပြသည်